အမွေအနှစ် ဦး ဆောင်မှုနောက်လိုက်: ဘာဘရာ Kopple မှအရူးမှထွက်ခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Crazy မှစ. လုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ်ဘာဘရာ Kopple: အအမွေအနှစ်ရဲ့ခဲအောက်ပါ
Hemingway တစ်အများအပြားရေတွက်အသင်းအဖွဲ့များသယ်ဆောင်အဆိုပါအမည်, "သဘောကျအောင်ဆက်ဆံ" နှင့် "ပါရမီရှင်" မနိမ့်ဆုံးသူတို့တွင်။ ဒါပေမယ့်ထွက်ရှာနေအတွင်းပိုင်းကနေတစ်ဝေးလျော့နည်း sensationalized အမြင်အာရုံသို့ slides ။ သူမ၏နွယ်၏ Mariel Hemingway ရဲ့ဦးစားပေးဖော်ပြချက်အဖြစ်တက်ချုပ်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်, ကနေဒီမှသူမ၏ namesake Likening တစ်ဦးကကျိန်စာ "ဒီစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောကျိန်စာခဲ့ကြောင်းအခြားအမေရိကန်မိသားစု။ " - သတ်သေ, စိတ်ကျရောဂါ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်စွဲများ - တလေးတစားနှစ်ဦးစလုံးကြောင်း နှင့်ဘက်စုံ Crazy မှစ. လုပ်ဆောင်ခြင်း, ဘာဘရာ Kopple ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်ပျေါ။ ဂျက် Hemingway ရဲ့သမီးသုံးယောက်, Mariel ၏အငယ်ဆုံး [ ... ] ၏လွတ်လပ်သော-ဝိညာဉ်တော်သည်သဘောသဘာဝနဲ့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်မကြာခဏခဲ့
ယခင်: Blackmagic ဒီဇိုင်း4နည်းပညာ¢ "Thunderboltâနှင့်အတူ UltraStudio 2K ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: လမ်းပြရုပ်ရှင်ရုံများ Los Angeles ကို "ဟုစိတ်ထဲသို့" World Tour များရရှိစေ